Toy izao no atao hoe Super Mario Run amin'ny dikan-freemium | Vaovao IPhone
Andro vitsivitsy lasa izay dia nolazaiko anao fa manomboka manontany mpilalao vitsivitsy i Nintendo Super Mario Run momba ny vidiny apetrak'izy ireo amin'ny Super Mario Run sy amin'ny mety ho kinova vaovao amin'ny lalao. Ary io dia, nanapa-kevitra i Nintendo fa hanisy marika ity Super Mario Run miaraka amin'ny 9.99 € satria zavatra tsy tian'ny rehetra izany. Eny, azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny Apple Store fa tsy afaka hiala amin'ny tontolo voalohany isika raha tsy mandeha amin'ilay boaty. Eny tokoa, Raha vao mandoa ianao dia hadinonao ny fandoavam-bola bebe kokoa.
Ary inona no tianao holazaiko aminao, Raha ny fahitako azy dia fahombiazana ityAdinontsika ny mandoa isaky ny te handroso toy ny lalao maro hafa izahay ao amin'ny App Store, eto izahay dia mandoa ary manana ny lalao feno. Satria, Azonao an-tsaina ve hoe hanao ahoana ny Super Mario Run maimaim-poana miaraka amin'ny micropayments? ...
Mila mijery fotsiny ny sary lohany amin'ilay lahatsoratra ianao, a sary noforonin'ny mpampiasa Twitter ahitantsika ny efijery sasantsasany izay mety ho an'ny Super Mario Run amin'ny maodin-dalao freemium. Eny, tsy mila izany isika mandoa vola, fa handoa ambaratonga aloha izahay, mahazo Toad, mifaninana amin'ny namana…. Ary tsy izany ihany, tadidinao daholo ve izany olona izay nandefa fanasana ho anao Candy Crush isan'andro? Eny, raha ny fiatraikan'ny Super Mario Run, tsy mahagaga raha tototry ny dokambarotra manasa anao hifandray amin'ny Super Mario Run ny tambajotra sosialinao.
Fantatrao izao, sintomy ny Super Mario Run vaovao, Andramo farafaharatsiny ary manapaha hevitra raha toa ka mendrika ny mandoa ny € 9.99 lany ny manokatra ny atin'ny lalao rehetra. Raha ny fijeriko azy dia mendrika izany, ary mendrika izany, noho izany raha tsy tianao ny lalao fafao fotsiny ny fampiharana, hamela anay ny mety hizaha toetra ireo ambaratonga telo voalohany ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Toy izao ny Super Mario Run amin'ny endriny freemium
Alberto Gonzalez Cadenas placeholder sary dia hoy izy:
Azoko tsara fa Nintendo dia tsy maintsy mahazo tombony amin'ny fampandrosoana ny lalao video. Toa lozika izany amiko. Ankehitriny, angamba ny olana dia tsy hoe karamaina ny lalao na tsia. Rehefa dinihina tokoa, misy lalao tena tsara any izay aloa. Angamba ny olana dia ny te-handoa vola 10 € amin'ny lalao mbola tsy mendrika azy… Angamba raha nifanaraka tamin'ny haavon'ny fampandrosoana ny lalao (€ 3 angamba?) Dia tsy ho nahazo be loatra fitsikerana.
Rehefa dinihina tokoa, firy ny lalao ao amin'ny App Store izay lafo amin'izany? Misy, eny, saingy inona ny kalitao an-tsary ananan'izy ireo? Mendrika ve izy ireo? Inona ny tsikera ananany na ny naotin'ireo mpampiasa azony?
Azoko tsara fa olana ny piraty (na dia somary sarotra kokoa aza io iOS io ary tsy dia mahazatra loatra hoy aho). Fotoana vitsy lasa izay dia tsy nisy tranokala misy rindrambaiko AppStore voaloa navoaka hametrahana rindrambaiko piraty ... Na izany aza, mitovy ihany ny zava-mitranga amin'ny sinema. Firy ny olona mitaraina amin'ny vidin'ny tapakilan-tsarimihetsika? Ary inona no fahombiazana azo isaky ny misy ny lanonana film ary ahena ho 1/3 na latsaka ny vidiny mahazatra? Firy ny olona mandeha amin'izany? Inona ny tombana ataon'ny olona amin'izany andro izany? Inona avy no tombony azo amin'ny sinema? Angamba raha ny vidin'ny vokatra dia mifanaraka amin'ny kalitaony, dia ho faly kokoa ny olona handoa lalao toy izany ary tsy hahazo tombana ratsy toa izany.
Angamba Nintendo tsy nahita ny fifandanjana eo amin'ny vidiny / kalitao. Ary mety hahazo vola be kokoa izy ireo raha toa ka mampihena ny vidiny hatramin'ny 1/3 amin'ny vidiny ankehitriny. Mety hisy inefatra ny isan'ny varotra ary mbola hahazo tombony bebe kokoa izy ireo. Fa hey, fanapahan-kevitra noraisinao tamim-panajana io. Ho ahy, tsy niasa saina akory aho hampidina ilay lalao. Tsy manome ahy na inona na inona izany.
Valiny ho an'i Alberto Gonzalez Cadenas
Erre dia hoy izy:
Amena amin'ny fanamarihana teo aloha. Ny antony mahatonga ny fitarainana na ny fifanakalozan-kevitra dia ny tsy fandoavana ny rindrambaiko, fa ny vidiny mifandraika amin'ny fampandrosoana ny lalao. Handoa mihoatra ny € 4 aho amin'ny lalao aorian'ny nanandramako azy.
Mamaly an'i Erre
Hevitra iPhone 8 vaovao miaraka amin'ny Touch Bar